I-Merberry Cottage-2 bdrm 1 yokuhlambela ezantsi kwedolophu yaseMonmouth
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDan
Kufuphi kuyo yonke into iMonmouth-ifikeleleka kwigumbi lokulala eli-2 lokuhlambela ikhaya kwindawo yabucala kumbindi wedolophu yaseMonmouth. Ukuhamba umgama ukuya kwikhampasi ye-WOU, iivenkile zekofu, indawo yokutyela, ipaki nayo yonke into esibonelela ngayo sisiXeko. Yonwabela imfihlo yendlu yonke kunye nepropathi ngexesha lokuhlala kwakho.
Le cottage inefenitshala entsha, izixhobo zombane kunye nezigqubuthelo zomgangatho. Iikhawuntara zeGranite ekhitshini eligcweleyo kunye nebhafu. Asinakulinda ukukwamkela!
Eli gumbi lokulala li-2 kunye nebhafu eyi-1 yekhaya liya kulala ngokukhululekileyo abantu aba-4. Kukho ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala. Isofa enegumbi lokuphumla, isitulo esimileyo kunye negumbi lokuhlala liya kwenza utyelelo kunye nokuphumla kube ntofontofo kwigumbi lokuhlala ngelixa usasaza usuka owuthandayo kwi-Smart TV. Idesika kunye nesitulo seofisi ziyafumaneka ukuba usedolophini ngomsebenzi okanye ufuna nje indawo yokuphumla ilaptop yakho kwaye uhoye ishishini. Ikhaya linezinto ezifikelelekayo ezibandakanya yonke indawo yangaphakathi kwinqanaba elinye, iingcango zangaphakathi ezingama-intshi ezingama-36, kunye nemivalo yokubamba kwindlu yangasese. Itafile yeglasi ephezulu ihleli ezine. Igumbi lokuhlambela libonisa i-faucet yamanzi kunye nesitya sokuhlambela kunye nesinyathelo kwishawari. Igumbi ngalinye lokulala libonelelwa ngebhedi yenkosi okanye ukumkanikazi, isinxibo esincinci kunye nesitulo, kunye negumbi legumbi lokuxhoma izinto zakho. Indawo yokupaka iyafumaneka kwi-driveway okanye kwindawo ebiyelwe ngasemva kweyadi.
Izinto eziluncedo ziquka: amagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela elinye, ikhitshi eligcweleyo elibandakanya uluhlu lombane olugcweleyo oluneoveni, imbiza yekofu, kunye nemicrowave. Ikhitshi ligcwele iimbiza kunye neepani, iipleyiti, iikomityi zekofu, iiglasi zewayini, izinto zesilivere nokunye okuninzi. Icala ngecala lefriji linendawo eninzi yezithako zakho ze-gourmet kunye nomenzi womkhenkce, naye!
Relaxa esofeni kwaye ufunde incwadi kwithala leencwadi lethu okanye uze neveli yakho entsha. Dlala imidlalo yebhodi kwingqokelela yethu okanye uze nosapho lwakho oluthandayo. Khwela ibhayisekile yakho ujikeleze idolophu, ukuya kwiYunivesithi yaseOregon okanye kwiimayile zebhayisekile ukuya emantla nasezantsi. Iikonsathi zasehlotyeni kwiipaki zendawo, imibhiyozo ye-4 kaJulayi, kunye nohambo lwemini ukuya elunxwemeni, eCorvallis, eSalem, okanye ePortland zonke zinokwenzeka kule ndawo.
IsiXeko saseMonmouth ngamava edolophu encinci. Umgama omfutshane ukusuka kwi-Hwy 99W, indlu ingaphandle kwesitrato esikhulu, umgama wokuhamba ukusuka eWOU, iipaki zalapha ekhaya, iideli's, ii-pubs kunye nokuthenga. IMonmouth isembindini phakathi kweSalem, iDallas kunye neCorvallis. Imisebenzi emininzi ikufuphi ngokuquka ikhosi yeGalufa i-Oak Knoll, iBrunk House, iPentacle Theatre, idolophu eyimbali yaseSalem, kunye neBaskett Slough National Wildlife Refuge. Siyimizuzu nje ukusuka kuMlambo iWillamette nayo yonke into efumaneka kwintlambo.
Sikwisiqingatha sendawo yabakhweli beebhayisikile abasingise eNxwemeni okanye abathatha inxaxheba kwenye yeendlela ezininzi zokukhwela kwindawo. Kumkhweli webhayisikile, iimbaleki kunye nabanamandla, kukho iimayile zebhayisekile / iindlela zokuhamba ezikhokelela nokusuka eMonmouth kunye neSalem kunye neepaki zokuhlola. Uyafuna ukubona ulwandle? Simalunga neyure enye ukuya eLincoln City naseOregon Coast. IPortland, iSilver Falls, iCorvallis, iMcMinnville nezinye zinokufikelelwa kwiyure okanye ngaphantsi. Ibekwe kwindawo ephakathi kwabo banomdla wokukhenketha iiBridges ezi-Covered of Oregon kunye nokubona amaphandle aseWillamette Valley. Kuninzi okufuneka ukwenze, uya kufuna ukuhlala usuku olongezelelweyo!
Ndwendwela incwadi yethu yesikhokelo ukufumana izimvo ezingaphezulu malunga nokuba wenze ntoni kwaye ungaya phi. Songeze ezinye zezinto esizithandayo kuluhlu. Izinto ezinomtsalane zasekuhlaleni kunye nezinto ezenziwayo nazo zidweliswe kwincwadi yethu yendlu. Ufuna ukwazi malunga nento ethile, vele ubuze!
Fika kwindawo ekulungeleyo njengoko unokufikelela endlwini ngebhokisi yokutshixa. Ulwazi lokufikelela luya kuthunyelwa kuwe phambi kokuba ungene kuhambo lwakho. Sifumaneka ngefowuni ngexesha lotyelelo lwakho. Sazise xa kukho into oyifunayo. Ngaba ufuna ukuva ngakumbi ngale ndawo? Funda ingqokelela yethu yeencwadana zengingqi kunye nolwazi olunikezelweyo ukuze uzihlole. Ufuna into, unombuzo? Buza nje kwaye siya kukwazisa ukuba singakunceda okanye sikuncede sikukhokele kumntu onako. UDan ngumhlali waseWillamette Valley ubomi bonke, siyavuya ukukunceda ngolwazi lwangaphakathi kule ndawo.
Fika kwindawo ekulungeleyo njengoko unokufikelela endlwini ngebhokisi yokutshixa. Ulwazi lokufikelela luya kuthunyelwa kuwe phambi kokuba ungene kuhambo lwakho. Sifumaneka ngefowun…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Monmouth